Iindlela zokusebenzisa i-Encantar yesiLwimi yeSpain
'I-Encantar' kunye neeVerbs Backs Like 'Gustar' Unokuba Namaqhinga
Encantar isenzi esithetha "ukuthanda" okanye "ukuthabatha." Ngokufana nesenzi, gustar , oko kuthetha ukuthi "ukuthanda" okanye "ukukholisa," isenzi sinempahla ekhethekileyo - kuthathwa njengesenzi sesantya. Isenzi esenziwe ngasemva njenge- ncantar isebenzisa isichazamagama esichaze ngqo kwaye ngokuqhelekileyo siza phambi kwesihloko.
Ukwakhiwa kwezivakalisi zesivakalisi sangasemva akuyiyo kuphela kwiSpeyin. IsiNgesi sisebenzisa lesi sigwebo ngokwamaxesha athile.
Ngokomzekelo, jonga isigwebo esicatshulwayo, "Uthando luba nzima kum."
Ukwakhiwa kwesi sakhiwo ngesiNgesi nangesiSpeyin izuzwe kwiilwimi zesiLatini kwi-1500s ebenokusetyenziswa kwesi sifundo.
Ulwimi lwaseSpain luboleke ngokuzenzekelayo izenzi ezininzi ukusuka kwisiLatini, zisetyenziselwe ukwakhiwa kwesiLatini ngasemva, zandula ukwakhiwa kwala magama angaphezu kwezi zibini ezenziweyo ezithandwayo ngexesha.
Izenzi zesiLatini nezesiSpain zikwabelana ngokuqhelekileyo - umntu, okanye isifundo se-semantic, akenzanga nantoni na, njengokuba kunjalo ngokubhekiselele kwisenzi. Kunoko, umntu uphendula imeko yangaphandle. Indlela efanelekileyo yokuyiqonda ngesiNgesi kukuqwalasela isigwebo, "Imoto yam yaphuka kum."
Ukusetyenziswa ngokuqhelekileyo kwe-Encantar
Isenzi encantar sinokudibaniswa kuzo zonke iimoya ezahlukeneyo: ukubonisa, ukuzithoba, ukuthobela, ukugqibelela, ukuzithoba, kunye nexesha leSpeyin: elikhoyo, langaphambili, elingaphelelekanga, elinemiqathango kunye nekamva.
Yaye, inokudibaniswa kwiimeko ezi-6 zesivumelwano somntu. Oko kuthetha ukuba ubuncinane iindlela ezili-107 zokudibanisa isenzi encantar . Nangona kunjalo, oko akuthethi ukuba zonke iintlobo ze- encantar zisetyenziselwa zonke izinto ngokuqhelekileyo ukuba zininzi.
Ukusetyenziswa okuqhelekileyo kwenzibe encantar kumntu wesithathu, apho isihloko kwisivakalisi sesiNgesi sibe yinto ngesiSpeyin, kwaye ngokufanayo.
Ngoko, "Ndiyayithanda indlu" ngesiNgesi ibe yinto yam inesiSpanish , kwaye "Ndiyathanda izindlu" ibe yinto yam . Kwaye ukuba sifuna ukusithi "Ndiyayithanda kakhulu indlu" okanye "Ndiyayithanda indlu," sinokuyiguqulela njengokuba ndiyifake i-canta la casa . Kwimeko yobuninzi, bekuya kuba ngam encasan lasas casas . I-Encantar , xa isetyenziswe njengenguqulelo " yokuthanda kakhulu" isetyenziswa ngendlela efanayo negustar .
Ezinye iindlela zokusetyenziswa rhoqo ze-Encantar
Kukho ubuncinane iindlela ezintathu ongayibona rhoqo kwi- encantar ngaphandle komntu wesithathu.
Enye indlela usebenzisa isenzi se- encantamos kwisivakalisi ezifana ne- te encantamos " siyakuyithanda " okanye "uyasithanda kakhulu."
Intsingiselo yesibini ye- encantar ithetha ukuba "ukuphosa isiphelo" okanye "ukucebisa." Kwiimeko ezifanelekileyo, i- encantamos ithetha ukuba "siphila isipela kuwe."
I-Encantar ingasetyenziselwa ngendlela eguquguqukayo, inqabileyo , oku kuthetha "ukuthokoza" okanye "ukuthokoza," ngakumbi xa uchaza ngokugqithiseleyo okanye usebenzisa ulwimi olumnandi. Nasi umzekelo ovela kwincwadana yokuhamba: Nos encantamos de poder darles la bienvenida en nuestra casa de vacaciones, oku kuthetha ukuba, "Sivuyiswa ngokukwazi ukukwamukela ekhaya lethu leeholide." Isenzi sisicatshulwa xa isihloko kunye nento into efanayo, kulo mzekelo, "Siyakwamkela kuthi."
Nangona i- gustar ingasetyenziswa kwiifomu ngaphandle komntu wesithathu, kuyinto engaqhelekanga.
Iingcebiso ezikhawulezayo zokusebenzisa i-Encantar
Izenzi zangasemva ezifana ne- encantar zonke ezizisebenzisileyo ezichaziweyo . Izivakalisi kunye nezenzi ezifana ne- encantar zingabandakanya i-preposition kunye nesibhengezo okanye isibizo ehambelana nento engekho ngqo. Oku kufuthi kubandakanywe ukubeka ingqwalasela okanye ukucacisa iqumrhu elenza ukuthanda. Umzekelo, i - ATM i-intanethi i-encentan los cuentos de amor, oku kuthetha ukuba, " Abasetyhini abaninzi bathanda amabali athandekayo.
Izenzi zangasemva zihlala zidibaniswa ukudibanisa igama lesihloko. Khawujonge isivakalisi, " Los días fríos me gustan ," oku kuthetha ukuba, "Ndiyathanda iintsuku ezibandayo." Isibizo sesifundo kwisivakalisi "iintsuku," ngoko, isenzi sidibanisa ukubonisa "iintsuku," kungekhona "I."
Ezinye iilwimi zangasemva ezifana ne-Encantar
Itheyibhile elandelayo iqulethe uluhlu lwezenzi zeSpain ezibuyiselwayo.
Phawula intambo efanayo phakathi kwezenzi. Uninzi luyasetyenziswa ukuchaza izimvo okanye ukuphendula kwengqondo / ngokomzimba, ukuthatha okanye ukuthatha inxaxheba.
kuba yinto enxantisayo
ukuba yinto ehle
Ukudibanisa kukaPedir, '' Servir, 'kunye' neVestir '
Izibambiso zesiLwimi zesiTali: i-Tenere
Ukusebenzisa isenzi esithi 'Ukuhlala'
UkuFometha nokuSebenza kweeNdawo eziNinzi
Iingqinisiso zesenzi sesiTaliyane: Ukungabikho
Ukusebenzisa 'Contar' ngesiSpanish
Indlela yokudibanisa "Demander" (Ukubuza) ngesiFrentshi
Impembelelo yaseMexico: Zapata, Diaz kunye noMadero
Iingcaphuno zikaWilliam Shakespeare 'iRomeo noJuliet'
Nini ukuthabatha i-College Course Pass / Fail
Iyiphi indlela yoBukumkani?
Thatha i-Leopard Shark yaseCalifornia
Ukuba Uthanda u-Enya
Indlela yokuphuma kwi-Cloom Broset
Iimyalelo ezili-10 ze-Ghost Hunting
Indlela yokuba nguMongameli ngaphandle kokuVota